China PE PPR fantsom-pamokarana fantsom-pamokarana sy orinasa | Jiarui
PE PPR tsipika famokarana fantsona
Ny extruder an'ny tsipika HDPE dia manamboatra volo sy barika avo lenta, ny boaty fanamafisam-bokatra dia manamafy ny boaty nify miaraka amin'ny rafitra manosotra tena. Ny motera dia mandray motera siemens sy haingam-pandeha voafehin'ny inverter ABB. Ny rafitra fanaraha-maso dia mandray ny fifehezana Siemens PLC na ny fanaraha-maso ny bokotra.
Ity tsipika fantsom-pe ity dia noforonin'i: charger material + extruder volo tokana + bobongolo fantsom-basy + tanky fanamafisam-peo + fantsom-panafody mangatsiaka x 2sets + milina fanaronana katsaka telo + fanapahana tsy misy vovoka + stacker.
Ny vatan'ny tanky an'ny tanky fanamafisam-peo dia mandray rafitra roa: ny fanamafisana ny habaka sy ny faritra mangatsiaka. Samy mitazona vy vy 304 # ny tanky sy ny vata fampangatsiahana. Ny rafitra banga tsara indrindra dia miantoka ny haben'ny paipaika; ny famafazana ny fihenan'ny rivotra dia hanatsara ny fahombiazan'ny fihenan-tsakafo; Ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rano dia mahatonga ny masinina hanan-tsaina kokoa.
Ny masinina entina amin'ity fantsom-pamokarana ity dia hampiasa karazana fanday. Miaraka amin'ny kaody metatra dia afaka manisa ny halavan'ny fantsona izy mandritra ny famokarana. Ny rafitra fanapahana dia mandray fanapahana tsy misy vovoka miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC.
Izy io dia afaka manamboatra fantsona HDPE miaraka amin'ny savaivony 16mm ka hatramin'ny 1200mm. Nandritra ny taona maro niainany tamin'ny fampivoarana sy ny famolavolana ny milina plastika, ity tsipika famokarana fantsom-bokotra HDPE ity dia manana rafitra tsy manam-paharoa, famolavolana tantara, famolavolana fitaovana mirindra ary fahombiazan'ny fanaraha-maso azo antoka. Araka ny fepetra takiana samihafa, ny fantsom-panafody HDPE dia azo noforonina ho toy ny tsipika famokarana fantsom-panafody maro sosona.
Ity fantsom-panafody fantsom-panafody ity dia mandray extruder volo tokana mahomby amin'ny bobongolo manokana, fahombiazan'ny famokarana fa tsy ny tsipika famokarana haingam-pandeha tokana nitombo 30%, ny fanjifana angovo ambany noho ny 20%, koa nampihena ny vidin'ny asa. Ny famokarana pipa PE-RT na PE dia azo tsapain-tanana amin'ny fanovana mety ny masinina.
Ny masinina dia afaka mandray ny fifehezana PLC sy ny lokon'ny tabilao fisehoan'ny kristaly ranon-javatra feno rafitra fanaraha-maso, tsotra ny fandidiana, ny fifandraisana amin'ny tabilao, ny fanitsiana ny milina, ny fanairana diso mandeha ho azy, ny endrika andalana iray manontolo, famokarana milamina sy azo antoka.
Ny tsipika famokarana fantsom-pira PPR dia misy ny extruder skru tokana an'ny SJ, bobongolo, boaty tsy misy fangarony, boaty famafazana, traktera, milina fanapahana, fihodinana sns. Ampiasaina indrindra hamokarana fantsom-panafody PPR, PE-RT mafana sy mangatsiaka, sns. Izy io koa dia miaraka amina extruders hafa sy bobongolo isan-karazany, izay afaka mamokatra fantsona roa sosona PPR, fantsona multilayer PPR, fantsom-pitaratra fibre fitaratra PPR, sns .
Previous: Andalana famokarana pipa PVC
Manaraka: PVC Braided Tube Extrusion Line
Extruder kambana roa-conical